प्रधानमन्त्रीज्यू, वैज्ञानिकलाई 'चान्स' दिने कि? :: डा. रन्जन मिश्र र डा. रमेश प्रसाद पाण्डे :: Setopati
डा. रन्जन मिश्र र डा. रमेश प्रसाद पाण्डे
चीनको वुहानमा सुरू भएको कोभिड-१९ महामारी अहिले विश्वव्यापी भइसकेको छ। नेपालमा पहिलो संक्रमण चीनबाट आएका एक जनामा जनवरीमा नै देखिएता पनि दोस्रो संक्रमण मार्चमा आएर मात्र देखिएको थियो।
२६०० सय बढीमा संक्रमण भइसक्दा कमसेकम ११ जनाको मृत्यु भएको छ। कोभिड-१९ का विरूद्ध कुनै उपचार नबनेको सन्दर्भमा हामीसँग रहेको रोकथाम विधि भनेको बिरामीको सम्पर्क अनुरेखण गर्ने, नयाँ रोगीको पहिचान गर्ने तथा उनीहरूलाई क्वारेन्टिन गरेर फैलिन नदिने हो।
पहिलो, कोभिड-१९ मा रहेको आनुवंशिक तत्व (न्यूक्लिक एसिड) -आरएनए पत्ता लगाउने विधि पोलिमेरेज चेन रियाक्सनमा (पिसिआर) आधारित परीक्षण र दोस्रो हाम्रो शरीरले कोभिड-१९ का विरूद्ध बनाएको एण्टिबडी पत्ता लगाउने र्‍यापिड एण्टिबडी टेस्ट।
यी टेस्टका आफ्नै विशेषता र सीमितता छन्। पिसिआरले बिरामीबाट लिइएको नमूनामा भएको भाइरल आरएनएलाई लगारिथमिक तवरले विस्तार गर्छ। जसले गर्दा थोरै भाइरस नमूनामा हुँदा समेत पत्ता लगाउन सक्छ। यसको मतलब कोभिड-१९ ले संक्रमण गरेको केही दिनभित्र नै पत्ता लगाउन सक्छ।
तर कोभिड-१९ मा पाइने आरएनए, डिएनएभन्दा एकदमै अस्थिर हुन्छ। जसले गर्दा नमूना संकलन गर्दा तथा प्रयोगशालामा हुन सक्ने सानो मानवीय त्रुटीले कोभिड-१९ हुँदा पनि नभएको देखाउन सक्छ। साथै यी परीक्षण केवल प्रमाणित प्रयोगशालाहरूमा मात्र प्रशोधन गर्न सकिन्छ, जसको कारण हाम्रो जस्तो देशमा परीक्षणका नतिजा एकदम ढिलो आइरहेका छन्। जुन बिरामी र स्वास्थ्यसेवा र निगरानी प्रणालीका लागि हानिकारक हुन्छ।
एण्टिबडीमा आधारित टेस्टमा भने यस्तो मानवीय त्रुटी हुने तथा ढिलाइ हुने सम्भावना कम रहन्छ। यस्तो टेस्टमा संक्रमितले कोभिड-१९ का विरूद्ध लड्न एण्टिबडी बनाएको छ कि छैन भनेर पहिचान गरिन्छ।
संक्रमण भएको करिब एक सातापछि हाम्रो शरीरले एण्टिबडी बनाउन थाल्छ, जुन लामो समयसम्म रहन सक्छ। कोभिड-१९ एक नयाँ भाइरस भएकाले ठ्याक्कै कति समयसम्म रहन सक्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। यसकारण र्‍यपिड एण्टिबडी टेस्ट परीक्षणको उत्तम विकल्प हैन।
यदि कोभिड-१९ का सँगै मिल्दा-जुल्दा अरु कोरोना भाइरसबाट पहिले नै संक्रमण भई तिनका विरूद्ध शरीरले एण्टिबडी बनाएको छ भने यस्ता किटले पोजिटिभ नतिजा दिन सक्छ।
पहिला चीनमा विकास भएका यस्ता किटहरूले करिब ८० -९० प्रतिशतमात्र सही नतिजा दिन सक्थे।
यस सन्दर्भमा हामी आफैं यस्ता किट बनाउन अग्रसर हुन आवश्यक छ। विकसित मुलुकहरूलाई नै आवश्यक टेस्ट किट जुटाउन धौ-धौ परिरहेको यो महामारीको अवस्थामा हामी उनीहरूमा मात्र भर परेमा नेपालमा कोभिड-१९ को जनस्तरमा सही परीक्षण र नियन्त्रण गर्न सम्भवत असमर्थ हुनेछौं।
कोभिड-१९ परीक्षणमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने त ?
विदेशमा अध्ययन गरेर नेपाल फर्केका युवा वैज्ञानिकहरू आफैं कम्पनी तथा अनुसन्धान संस्थाहरू खोलेर विश्व-स्तरीय काम गर्न थालिसकेका छन्।
जस्तै: शिखर बायोटेकले अहिले एण्टिबडी उत्पादन गरी विश्वस्तरमा विक्री गरिरहेको छ।
संसारभर कोभिड-१९ परीक्षणका लागि दिनानुदिन नयाँ प्रविधि विकास भइरहेका छन्, जुन खुला पहुँचसहित प्रकाशित भएका छन्।
१. आरटी ल्याम्प विधि
महामारीसँगै धेरै भाइरस परीक्षण गर्ने विधि विकास भएका छन्। हामी जस्तो न्यून आय, सीमित स्रोत र साधन भएको देशमा सस्तो, प्रभावकारी र तीव्र गतिमा परिणाम दिने विधी उपयोग गर्नु अत्यावश्यक हुन जान्छ। ती विधीमध्येको एक आरटी ल्याम्प विधि (रिवर्स ट्रन्स्क्रिप्सन लुप-मिडिअेटेड आएसोथर्मल अेम्प्लिफिकेसन) नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विशेष उपयोगी विधि हुन सक्छ।
हालसालै आएर केही महिना अगाडि यो विधि चीन र कोरियाका वैज्ञानिकहरूले कोभिड-१९ को परीक्षण गर्न विकसित गरेका हुन्। सो विधिमा भाइरल न्युक्लिक एसिड प्रशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। हालै आएर हार्वर्ड युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूले यस विधिको विकसित रूप विकास गरेका छन्, जुन सामान्य छ, सस्तो छ र तीव्र रूपमा भाइरस छ कि छैन भनेर जाँच्न उपयोगी छ।
यो विधिमा आवश्यक पर्ने अरु रसायन जस्तै: सोडियम आयोडाइेड, इडिटिअे, इथनोल, फोस्फेट बफर, हाइड्रो क्लोराइड जस्ता रसायन पनि नेपालमै प्रयोग भइराख्ने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रसायन विभाग र जीव विज्ञान (बायो टेक्नोलोजी) विभागमा हजारौंदेखि लाखौं नमूना प्रशोधन गर्न पुग्ने परिणाम सहजै उपलब्ध हुन सक्छ।
आरटी ल्याम्प रसायन अहिले नेपालमा तयार गर्नु प्राय: असम्भव छ। तर थोरै लगानीमा विदेशबाट निर्यात गर्न सकिन्छ। यो विधि प्रयोग गरेर एकै पटकमा सयौदेखि हजारौं नमूना सस्तो, सुलभ, र उच्चस्तरले विशेष सामग्री बिना नै देशका विभिन्न स्थानमा परीक्षण गर्न सम्भव हुन सक्छ।
यो विधि सस्तो र सजिलो हुनाले एउटै संक्रमितको २-३ वटा फरक फरक नमूना पनि प्रयोग गरेर धेरै विश्वासिलो परिणाम निकाल्न सकिन्छ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा र्‍यपिड टेस्टबाट पोजेटिभ देखिएका बिरामीको पुन: परीक्षण गर्न र कन्ट्याक ट्रेसिङ द्रुत रूपमा गर्न अहिले प्रचलित पिसिआर विधि ढिला र महँगो पर्न जाने हुन्छ।
२. एलाइजामा आधारित प्रविधि
द्वितीयक एन्टिबडीमा 'एचआरपी एन्जाइम' जस्ता वर्णक प्रतिक्रिया देखाई रंगको विकास गर्ने तत्व जोडिएको हुन्छ।
द्रुत परीक्षण किटको तुलनामा यसको बेफाइदा भनेको यो हेरचाहको बिन्दुमा प्रयोग गर्न सकिँदैन र नतिजा पाउन पनि बढी समय (करिब ३-४ घण्टा) लाग्छ। तर एकै पटकमा ९६ वा ३८४ नमूना परीक्षण गर्न सकिन्छ।
'एलाइजा' मा आधारित टेस्ट गर्नका लागि ठूलो स्रोत-साधन चाहिँदैन। यो टेस्ट गर्न सक्ने आवश्यक जनशक्ति नेपालमा छ।
शिखर बायोटेक कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष र वैज्ञानिक निर्देशक डा. रभिन्द्र सापकोटाका अनुसार उहाँको कम्पनीले केही वर्षदेखि यस्ता द्वितीयक एन्टिबडी नेपालमा नै उत्पादन गरेर संसारभर बेचिरहेको छ।
साधारणतया भाइरसको बाहिरी खोलमा हुने घटकहरूले हाम्रो प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रिया देखाउँछन्। कोभिड-१९ को हकमा ती घटकहरू बाहिरी खोलमा हुने स्पाइक प्रोटिन हुन सक्छ। वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरेर सो पत्ता लगाउन सक्छन्। भारतलगायत अन्य देशहरूमा सो पत्ता लागिसकिएको छ, उनीहरूको अनुभवबाट पनि सिक्न सकिन्छ।
अवश्य नै 'एलाइजा' द्रुत परीक्षण किटलाई पूर्ण प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। तर एक भरपर्दो 'एलाइजा' टेस्ट बनाएमा त्यसलाई द्रुत परीक्षण किटमा ढाल्न खासै गाह्रो हुँदैन। 'ल्याटरल-फ्लो' मा आधारित किट बनाउने प्रोटोकल स्थापित भैसकेका छन्।
नेपालमा पनि "काठमाण्डु व्यवहारिक विज्ञान प्रतिष्ठान (KIAS)" ले कागजमा आधारित 'ल्याटरल-फ्लो' किट बनाउने काम गरिरहेको छ।
यस संस्थाका संस्थापक डा. बसन्त गिरीका अनुसार एक सफल 'एलाइजा' टेस्टलाई 'ल्याटरल-फ्लो' मा आधारित द्रुत परीक्षण किट बनाउन चाहिने विशेषज्ञता उक्त संस्थाका वैज्ञानिकहरूसँग छ।
सरकारले के गर्नु पर्ला?
सरकारले अहिलेसम्म लिएका नीतिले गर्दा समयमा लकडाउन गर्दा समेत नेपालमा कोभिड-१९ ले भयाभह अवस्था सिर्जना गर्दैछ। यसमा विशेषज्ञबाट सहयोग नलिइएको प्रस्ट झल्कन्छ। सरकारले तुरुन्त एक विज्ञहरूको टास्कफोर्स बनाउन जरूरी छ, जसले कोभिड-१९ का विविध आयामहरूमा वैज्ञानिक सल्लाह दिन सकोस्। यस्तो टास्क फोर्सको एक जिम्मेवारी कसरी परीक्षणको दायरा बढाउने र त्यो बढाउँदा टेस्टिङ किटहरूको मागलाई कसरी थेग्ने भन्ने हुनुपर्छ।
दोस्रो, लकडाउनमा समेत यस्ता अनुसन्धानका गतिविधिहरूलाई खोल्न आवश्यक छ। अन्य देशहरूले पनि कोभिड-१९ को निदान र उपचारमा आवश्यक गर्ने केन्द्रहरूलाई लकडाउन खुला छोडेका थिए। अवश्य नै लकडाउन आवश्यक छ, तर कोभिड-१९ सम्बन्धी अनुसन्धानहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर खुला छोड्नुपर्छ। वैज्ञानिकहरूले पनि विश्वविद्यालयहरूमा र नास्टमा भौतिक दूरी कायम गर्दै यस्ता गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्छ।
यसो गरेमा नेपाल सुहाउने परीक्षणका किट विकास हुने छन् र कोभिड-१९ लगायत अन्य रोगको निदान गर्न आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा फड्को मार्नेछौं।
यसो गर्न सकेमा हामी कोभिड-१९ विरूद्धको युद्धमा त सफल हुने नै छौं, भविष्यमा आइपर्ने अरु महामारीका विरूद्ध पनि तयार हुनेछौं।
हाम्रो सरकारसँग इच्छाशक्ति छ त?, कि सरकार नेपाललाई सधैं भिकारी नै राख्न चाहन्छ? ‘चान्स पाए नेपालीले गर्छ’ भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई लेखकद्वय मार्फत् सारा नेपाली युवा वैज्ञानिकहरूको एउटै खुला प्रश्न छ, महामारी र अन्य विकराल परिस्थितिसँग जुध्न सक्ने नेपाल निर्माण गर्न, हाम्रा नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई ‘चान्स’ कहिले दिने त?
(डा. मिश्र स्विस फेडरल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी ज्युरिख, स्विजरल्यान्डमा कार्यरत क्यान्सर वैज्ञानिक हुन् भने डा. पाण्डे एमआइटी - म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, अमेरिकामा कार्यरत वरिष्ठ बायो इन्जिनियर वैज्ञानिक हुन्।)
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २४, २०७७, १३:१०:००